कोमल ओलीको कवितालाई मनोज गजुरेलले पनि फर्काए कवितावाटै जवाफ:: Mero Desh
कोमल ओलीको कवितालाई मनोज गजुरेलले पनि फर्काए कवितावाटै जवाफ
Published on: २४ असार २०७८, बिहीबार ०७:०५
काठमाडौ । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा एमालेबाट सांसद कोमल वलीले वाचन गरेको एउटा कविता निकै आलोचित भयो । उनले ‘बाँदरको जमात र अमृतपानको सपना’ नाम को कविता सुनाएकी थिइन् । जसमा बाँदर छेपारा जस्ता शब्द प्रयोग भएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा उनको यो कविताको निकै आलोचना भएपछि उनले त्यसवारे प्रतिकृया पनि दिएकी छन् ।
उनको कविता नेकपा एमालेका माधव नेपाल पक्ष प्रति लक्षित भएको भन्दै आलोचना गरिएको हो । उनले त्यस वारे प्र’तिकृया दिएको भएपनि त्यसको चर्चा अझै सेलाए को छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपक्षीय राष्ट्रिय सभा सदस्य वलीले सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमै कविता सुनाए की थिइन् ।
त्यस कविताबारे सामाजिक सञ्जालमा पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया आइरहँदा हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेलले पनि त्यसमा कवितावाटै प्र’तिकृया दिएका छन् । उनले एउटा व्यंग्यात्मक कविता रचेका छन्।जसलाई उनले शीर्षक दिए का छन्– कोमल कविता विरुद्ध कठोर कविता१
उनी लेख्छन् : कोमल कविता
बाँदरहरूको देश हुँदैन
ढेडुहरूको भेष हुँदैन
कुकुरहरूको बेस हुँदैन
भुतहरूको फेस हुँदैन
छेपारेहरूको रंग हुँदैन
चेपारेहरूको ढंग हुँदैन
मूर्तिहरूको अंग हुँदैन
फूर्तिहरूको रंग हुँदैन
यो पनि:काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी जसपाको संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले पूर्व जाने र पश्चिम जानेहरू एकै ठाउँमा बसेर कतै नपुगिने टिप्पणी गर्नुभएको छ । जसपा विभाजनको दिशातर्फ अघि बढेका बेला बुधबार ट्विट‍ गर्दै डा भट्टराईको यस्तो टिप्पणी र्गनुभएको हो ।
उहाँले पार्टीको एकता र फुटको कुनै फर्मुला नहुने पनि बताउनुभएको छ । उहाँले गन्तव्यको लक्ष्य र कार्यदिशा प्रमुख हुने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उहाँले ट्वीट गर्दै भन्नुभएको छ, ‘पार्टीको एकता र फुटको कुनै फर्मुला हुन्न। तैपनि सामान्य मान्छे एकताबाट खुशी र फुट्दा दुखी हुन्छ। मुख्य कुरो कहॉ पुग्ने ९लक्ष्य० र कुन बाटो जाने ९कार्यदिशा० भन्ने हो। पूर्व जाने र पश्चिम जानेहरू एकै ठाउँमा बसेर कतै पनि पुगिन्न। बरू पूर्व जाने एकातिर पश्चिम जाने अर्कोतिर हुँदा राम्रो।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमन गर्ने या निरन्तरता दिने भन्ने विवादले जसपाको विभाजित बनेको थियो । जसपाको विवाद निरुपण गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले इजलास गठन गरेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
माइकल ज्याक्सन किन अर्लाम लगाएर से’क्स गर्थे ? थाहा पाउनुहोस् रोचक तथ्य
केहि घण्टामा ७ करोडले हेरेको स्कुलमा शिक्षकको ब‘बाल डान्स!
“उडेको विमानको पाङ्ग्रामा लुकेका व्यक्ति जीवितै फेला!
एकाएक कसरी फेरिए कोरियाली शासक किमजोङ।
पुर्व युवराज सँग नाम जो’डिएको देवयानी फेरि ए‘काएक चर्चामा।
फेसबुकमा चि‘नेको प्रेमी भेट्न हे‘लिकप्टर लिएर पुगे यि युवा।